ကမ္ဘာ . . . မင်း ဘာကြောင့်သေတာလဲ - Yangon Media Group
ကမ္ဘာ . . . မင်း ဘာကြောင့်သေတာလဲ
ကမ္ဘာမြေကို လိမ္မော်ရောင်စုတ်ချက်များ ဖြင့် ခြယ်သထားသည့် မနက်ခင်းမြင်ကွင်းက နှစ်လိုဖွယ်ရာပန်းချီကားတစ်ချပ်ပမာ …။ သို့သော်လည်း လူအများစုက မနက်ခင်းအလှကို လျစ်လျူရှုလျက် မိမိတို့ လက်ဝါးပေါ်က မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုသာ ပွတ်နေ လေသည်။ ဒီနေ့မနက်မှာတော့ သူတို့လက်ဝါးပေါ်ရှိ ဖုန်းကလေးများက အကျဉ်းတန်လွန်းလှ သောသတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဆောင်ကြဉ်းယူဆောင်လာခဲ့ပေသည်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသောသတင်း။ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်သည့် သူတို့အတွက်တော့ ပို၍ပင်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းလွန်းလှပေသည်။
အဆိုပါသတင်းမှာ ပြည်သူများအကြား၌ပင်မက အနုပညာရှင်များအကြား၌ပင် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည့်သတင်းဖြစ်သည့် အဆိုတော် ဂျီလတ်၏ ညီဖြစ်သူ တေးရေးကမ္ဘာ သေဆုံးသည့်သတင်းပင်ဖြစ်သည်။ လူအများ၏ပါးစပ်ဖျား၌ စွဲခဲ့သည့် ‘အချိန်လွန်ငှက်’၊ အစ်ကိုဖြစ်သူ သီဆိုခဲ့သည့် ‘ခဏတာ’၊ ‘မြို့ပြလမ်းခွဲ’အစရှိသည့်သီချင်းများကို ပရိသတ်ရင်ထဲသို့ ရောက်ရှိအောင် ရေးစပ်သီကုံးပေးခဲ့သူဖြစ်ပေသည်။ တေးရေးကမ္ဘာသည် မတ် ၄ ရက် နံနက် ၆ နာရီတွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ သီရိမဏ္ဍိုင် လမ်းမဘေးတွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်နှင့် သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။
”သီရိမဏ္ဍိုင်လမ်းမပေါ်မှာ လူတစ်ဦး မှောက်လျက်အနေအထားနဲ့ လဲကျသေဆုံး နေလို့ ဆေးရုံကို ပို့ပေးဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေက အကူအညီတောင်းတာကြောင့် နေပြည်တော် ခုတင် ၁ဝဝဝ ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ”ဟု သဗ္ဗသုခအလုံးစုံအခမဲ့နာရေးကူညီမှု အသင်းမှ ဦးသန်းထိုက်ဦးက ပြောပြသည်။ ဖေကမ္ဘာငြိမ်းချမ်း(ခ)တေးရေးကမ္ဘာ သည် အသက် ၃၅ နှစ်ခန့်ရှိပြီး ခါးအထက် ပိုင်းတွင်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာနှင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ၎င်းသေဆုံးမှုကို လူသတ်မှုဖြင့် အမှု ဖွင့်ထားသည်။
”လောလောဆယ် သွေးထွက်ဒဏ်ရာ လေးတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ လက်နက်ကတော့ သုံးမြှောင့်လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့။ သူတို့ပြောနိုင်တာတော့ အချွန်လိုလိုကိရိယာတစ်ခု၊ လက်နက်တစ်ခုပေါ့။ ထိုးခံရတဲ့ပုံစံပေါ့။ လောလော ဆယ်တော့ သေဆုံးတဲ့အကြောင်းအရာကို မပြောနိုင်သေးဘူးတဲ့”ဟု ထုံးဘိုရဲစခန်းမှ ဒုရဲမှူး ကျော်အောင်ကဆိုသည်။ အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ သွားရောက်စစ်ဆေးရာတွင် ဝဲခါးဆစ်အထက်နားတွင် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ဝဲရင်ဘက်တွင် ညိုမည်းဒဏ်ရာ၊ ဝဲနံစောင်းတွင် ညိုမည်းဒဏ်ရာ၊ ဝဲတံတောင်တွင် ညိုမည်းဒဏ်ရာနှင့် ယာဘက်ခါးစောင်း ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများ တွေ့ ရကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးနေသူ၏ အနီးအနားတွင် မော် တော်ယာဉ်အပါအဝင် မည်သည့်တစ်စုံတစ်ရာမျှ မတွေ့ရကြောင်းလည်းဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် တေးရေးကမ္ဘာ အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လူသတ်မှု ပုဒ်မ ၃ဝ၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်းသိရသည်။ သီချင်းတွေကိုချစ်သည့် တေးရေးကမ္ဘာ ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် သူ့ကိုချစ်ခင်သည့် အနုပညာမောင်နှမများမှ လွန်စွာပင်ဝမ်းနည်း ကြေကွဲခဲ့ကြရသည်။ အစ်ကိုဖြစ်သူ အဆိုတော် ဂျီလတ်ကလည်း သူ၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ‘ကမ္ဘာ့သတင်း မှန်ပါတယ်’ဟု အဆိုပါနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရေးသားခဲ့ပြီး အနုပညာရှင် များနှင့် ပရိသတ်များက ဝမ်းနည်းကြောင်း မှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် Zaya Ditha အမည်ဖြင့် အသုံးပြုသည့် ဦးဇင်းတစ်ပါးမှလည်း ”လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကျော်လောက် က ကိုယ်တည်းနေတဲ့ဟိုတယ်ကို စာအုပ်တွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ကြီးနဲ့ သူရောက်လာတယ်။ ဘုန်းဘုန်းအတွက် စာအုပ်လက်ဆောင်လာ ပေးတာတဲ့။ တပည့်တော်က ခရစ်ယာန်မို့ ကန် တော့လို့မရတာကို နားလည်ပေးပါတဲ့။ ကန် တော့မရဘူးသာဆိုတယ် သူက ကိုယ့်ကို အရိုအသေပေးတော့ သူ့နဖူးက ကိုယ့်ခြေဖမိုးကို ထိနေပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်း သူကလှမ်းပြီး ဖုန်းဆက်သေးတယ် ဘုန်းဘုန်းကို သတိရလို့ တဲ့ ဘုန်းဘုန်းအတွက် စာအုပ်တွေ စုထားတယ် နော်တဲ့ မကြာခင် မန်းလေးလာခဲ့မယ် ပြန်ဆုံ ကြမယ်နော်တဲ့။ တစ်ခါတုန်းက ကိုယ်ကနေ သူ့အပေါ် နည်းနည်းပါးပါး ကူညီထားဖူးတော့ သူတတ်နိုင်တာတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ကိုယ့်ကိုကူညီ နေတာ။ ကမ္ဘာရယ်၊ မင်းပြောတော့ ငါတို့ ပြန် ဆုံကြမယ်ဆို ခုတော့ ရုတ်တရက်ကြီး ထွက်ခွာသွားပြီတဲ့လားကွာ”ဟု ရေးသားထားသည်။
Franzo ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုပ်ပြီး အနုပညာရှင်များဖြစ်သည့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ မေဂရေ့စ်တို့ ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားသည့် ‘ဧဒင်ရဲ့နတ်သမီး’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နှင့် ကြိုးကြာတို့ သီဆိုထားသည့် ‘သူငယ်ချင်း’ သီချင်းကို တေးရေးကမ္ဘာက ရေးစပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာနှင့် သူ၏အကြားတွင် အမှတ်တရအဖြစ် အဆိုပါသီချင်းတစ်ပုဒ် အမှတ်တရကျန်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က သူ၏လူမှုကွန် ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ပင် အခြားအနုပညာရှင်များစွာနှင့်အတူ ကမ္ဘာကို ချစ်မြတ်နိုးကြသည့် ချစ်သူခင်သူများစွာကလည်း သူ့အတွက် ဝမ်းနည်း ကြောင်းစကားများကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ရေးသားဝေမျှလျက်ရှိကြသည်။ ”ကမ္ဘာ … မင်း ဘာကြောင့်သေတာလဲ” ဆိုသော အသံတိတ်မေးခွန်းများနှင့်အတူ အမှုမှန်ပေါ် ပေါက်ရေးအတွက်လည်း အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးနေကြပေသည်။ ထို့ကြောင့် တေးရေးကမ္ဘာ ဆုံးပါးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိသားစုနှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်း ကြောင်း ပြောလိုပြီး တေးရေးကမ္ဘာတစ်ယောက် သူချစ်တဲ့သီချင်းတွေနဲ့အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ခရစ် တော်၌ အိပ်စက်အနားယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ရပါတယ်။
၃ ဒသမ ၅ သန်းကို မျက်နှာမူ၍...
ရခိုင်တိုက်ပွဲ ဘယ်ကို ဦးတည်နေသလဲ
ကျောက်ကြီးမြို့၌ တရားမဝင် သစ်ခွဲနေသော သစ်ခွဲသားများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိ